ဖူးနုသဈ: အရှဖေ့ကျ ကမျးခွရေဲ့ ညခမျြး
ပြန်တွေးတိုင်း ပျော်စရာကြီးအကိုရေ။ အကိုလာပေလို့ပဲ မဟုတ်ရင် တီးတဲ့သူက နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်အဆင်ပြေပါစေ အကိုရေ
တွေ့လည်း မတွေ့လိုက်ဘူး (ညနေပွဲမလာဖြစ်ဘူးလေ) ဟိ
ကတောက် နာလိုက်တာ ကိုဂုတ်တီရဲ့ ငါးသလောက်ပြုံးကိုမမြင်လိုက်ရဘူးးး
နောက်တပွဲပေါ့ကွာ။ မောင်နှမတွေ စုမိတဲ့ဒီလိုညလေးကိုအမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ.
(အခုမှဘဲ နွေးနေခြည်အကူအညီနဲ့ ဖတ်လို့ရတော့တယ် :P)
ကောင်းတယ် တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေမေ့ထားပြီး ပျော်မယ်ထင်တာလိုက်လုပ်တာ အကောင်းဆုံး
ခုတော့အနော် ၂ထွေက နေတယ် Zawgyi_oneပြောင်းလိုက်
Padauk-Zawgyi ပြောင်းလိုက်နဲ့ လက်တော့အတော်သွက်လာပြီ။ဟားဟား
Yup, all these you know C,C++,PLC, JAVA, VB, BASIC, C#, JavaFX Script,PHP etc. make you busy :D
So, you don't ask me to learn all these rubbish, alright??? :)
အမ အခု ပိတောက် ဖောင့် ဒေါင်းလုပ် အင်စတော လုပ်လိုက်ပြီ။ ဖတ်လို့ရသွားပြီဟေးးးး အဲဒါလာအကြောင်းကြားတာ...
ပျော်ရွှင်သော ၂၀၁၀ ကို သာ ဆုံရပါစေ...